होम इन्सपेक्सन भनेको के हो ? - Skillsewa
होम इन्सपेक्सन भनेको के हो ?
वास्तविक समयमा विभिन्न उच्च प्रबिधि प्रयोग गरि भवनको जाँच पर्ताल गरि त्यहाँ रहेका र उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित समस्याहरु पत्ता लगाउने प्रक्रियालाइ नै होम इन्सपेक्सन भनिन्छ। नयाँ वा पुरानो भवनको भार बहन क्षेमता र बस्न योग्य छ वा छैन भन्ने पत्तालगाउन होम इन्सपेक्सन गरिन्छ। दक्ष्य होम इन्स्पेक्टरले सम्पुर्ण रुपमा चेक जाँच गरि भवनको वर्तमान अवस्था र भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याहरु समेटेर रिपोर्ट तयार गर्दछन। त्यस अनुसार नविकरण गर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने निष्कर्ष निकालिन्छ र यदि गर्नु परेमा लाग्ने खर्चको अनुमानित बजेट तयार गरिन्छ।
होम इन्सपेक्सनको इतिहास
होम इन्सपेक्सनको अवधारणा १९७० देखि संयुक्त राष्ट्रसंघ अमेरिकाबाट सुरु भएको मानिन्छ। सुरुवाती चरणमा होम इन्सपेक्सनलाइ ब्यबसायीक घर जग्गा किन बिचमा मात्रै प्रयोग गरिन्थ्यो। पछि यसको दायरा बढाएर बेबसायिक रुपमा सम्पुर्ण निर्माण कार्यहरुमा लागु गरियो।
छिमेकि देश भारतले आजको दिन सम्म आइपुग्दा होम इन्सपेक्सनलाइ सरकारि तवर बाटै लगभग अनिवार्य जस्तै बनाइसकेको छ भने हाम्रो देश नेपालमा यसलाइ ब्यवसाय बनाउने त परको कुरा यस्को बारेमा बहस नै सुरु बहेको छैन​। अझ नेपाल त ठुलो भुकम्पबाट गुज्रिएको छ​। त्यसले हाम्रो भवनमा कस्तो असर परेको छ भन्ने कुरा सामान्य क्र्याक को निरीक्षण गरेर पुग्दैन​। समय समयमा यस्को इन्सपेक्सन गराउनु जरुरि छ​।वर्तमान अवस्थामा घरमा देखा पर्ने समस्या हरुलाइ त्यसको जड र कारण पत्ता नलगाइ वरिपरि पाइने प्लम्बर, इलेक्ट्रिसिएन हरु बोलाएर सामान्य मर्मत सम्भार गर्दै आएका छन​। जसले क्षेणिक रुपमा समस्या समाधान त गर्ला तर कालान्तरमा झनै ठुलो क्षति निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले होम इन्सपेक्सन अत्यन्तै जरुरि छ।
कस्ता ब्यक्ति होम इन्सपेक्टर बन्न सक्छ ?
राम्रो लेख पढ गर्न जान्ने ब्यक्ति होम इन्सपेक्टर बन्न सक्छ तर त्यसका लागि उसले प्रमाणित होम इन्सपेक्सन कम्पनीबाट तोकियको तालिम लिएको हुनु पर्ने छ​। त्यस्तै, होम इन्सपेक्सनमा प्रयोग हुने सफ्टवर तथा मेसिनहरुको राम्रो ज्ञान भ​एको हुनुपर्नेछ​। केहि समय प्रशिक्षार्थीको रुपमा काम गरिसकेपछि भवन सम्बन्धि अनुभवको आधारमा काम गर्न सकिनेछ​।
होम इन्सपेक्सनको महत्वपुण खण्ड नै चेक लिस्ट हो। चेक लिस्ट कै आधारमा सम्पुर्ण घरको इन्सपेक्सन रिपोर्ट तयार हुन्छ​। भवनको महत्व र प्रक्रितिका आधारमा चेक लिस्ट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ​। प्रत्यक भवनको चेक लिस्ट एक अर्का सग नमिल्न सक्छ​।
त्यस्तै, इन्सपेक्सनका उपकरणहरु होम इन्सपेक्सनको प्रमुख अंश हो। उपकरण बिना इन्सपेक्सन अधुरो रहन्छ​। इन्सपेक्टरको खुल्ला आँखाले नदेखेको वा देख्न नसकेको सम्पुर्ण बिबरणहरु उपकरणले दिन सक्छ​। उदाहरणका लागि, रंग रोगन गरिएको भित्ता हातले छुदा सुख्खा हुन सक्छ तर मोइस्चर मिटर र थर्मल क्यामेराको को मदतले त्यहा रहेको ओसको मात्रा र त्यसले पछि पर्न सक्ने नकारात्मक क्षतिको अनुमान र उपचार गर्न सकिन्छ​।
होम इन्सपेक्सन इन्स्पेक्टर एप